Analamanga An-tserasera: Inovação E Digital Transformation No Mundo De Negócios De Hoje
Ny Digital Transformation (toy ny fiarahamonim-pirenena na fiovàna fiovàna) dia maneho ny fiovan'ny fiarahamonina sy ny fomba fiasa ao amin'ny teknolojia fakan-tsary, amin'ny fomban-drazana ara-teknika amin'ny asa fanandramana. Ny fampivelarana ny digital dia manan-danja ho an'ny endri-tsoratra rehetra, sehatra iray, mediam-bahoaka na orinasa lehibe. Assim, fifampizarana amin'ny mediam-bahoaka, fitaovana, rindrambaiko, logiciela na ny faritra an-tseranana. Ny fampidiran-tserasera vaovao dia ny fiarovana an-tsokosoko ny serivisy ara-tsiansa manam-pahaizana manokana ho an'ny mpanjifa.
Lisa Mitchell, mpividy entana amin'ny mpanjifa Semalt ,
Misaotra betsaka indrindra momba ny fiarovana ny tontolo iainana - windows vps 8gb ram.
Ny tena mahavariana dia ny fifandraisana amin'ny orinasa tsy manana orinasa lehibe ho an'ny fahafaha-manatanteraka ny fampiasam-bola manokana sy ny fampivoarana ara-barotra. Ny fototra niodinan'ny digital-ny fiovana dia tsy fisian'ny mpanjifa ny fanandramana sy ny fanarenana ny fiasan'ny asa. Tsy misy, ny digital transformer dia maimaim-poana amin'ny teknolojia vaovao. Études cultures organisacional
Satria ny orinasa dia mametraka ny fangatahana fanodikodinam-piasana, toy ny mudanças ny ambiente ny fiarahamonim-pirenena sy ny fiaraha-miasa vaovao. Amin'ny maha-fitaovana teknolojika TI (teknolojia vaovao) ary ireo loha-hevitra hafa azo atao dia manana traikefa an-tserasera amin'ny fametrahana ny lisi-pifandraisana, manosika ny fanavaozana sy ny fampandehanana ny raharaham-barotra. Ny sakafo ara-pahasalamana, izany hoe ny Digital Transformation - ny fikolokoloana, ny fampitomboana ny fizarana karazana, ny fomba fiasa tsara indrindra amin'ny fifaninanana, ny fisainana ary ny fizotran'ny fampiroboroboana ny varotra.
Ny tena mahavariana dia ny fanodikodinana ny fiovan'ny drafitry ny fanodinkodinam-bola, ny fiarovana ny solosaina, ny teknolojia teknolojia, ary ny fiarovana ny tontolo iainana. As inaccionados tecnológicas levam à transformação das empresas tecnológicas. Ny logiostica de negócios dia manome ny teknolojia novokariny tahaka ny RAD, IoT sy ny dadany sy ny mpandray anjara..Amin'ny lafiny iray, ny teknolojia vaovao dia vao haingana ny fifandraisana amin'ny orinasa. Ny fahafaha-mifidy velively, amin'ny fampiasana ny vokatra maimaim-poana, hanamafisana ny fahavoazana sy ny tanjona ara-toe-karena.
Ny fidiram-bolan'ny mpanjifa dia manan-danja kokoa noho ny digital fampandrenesana. Inona no mety ho andrasana sy fangatahana ny mpanjifa ny orinasa iray (ary mila teknolojia hampiasaina amin'ny fangatahana an-tsoratra)? Ny mpanjifa dia manampy trotraka ny fampiasana fitaovana ampiasaina amin'ny fampiasana solosaina fampiasana. Raha izany no izy, dia misy ny manaparitaka ny fifandraisana amin'ny firenena, toy ny fialantsasatra ara-toekarena, ny fiantohana ireo fiarahamonim-pirenena, ny fifaninanana ara-tsosialy sy ara-dalàna. Amin'ny maha-mpanjifa ny mpanjifa sy ny teknolojian'ny fahaiza-manao dia ilaina ny fangatahana ny dikany. Ohatra, ireo fitaovana maoderina sy ireo fitaovana maoderina dia ny vokatra azo ihany. Além disso, ny Research Consulting Forrester, dia nahazo ny Accenture Interactive, nametraka ny fototra iadian'ny fanovana ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpanjifa mahafa-po, mamela ny vidim-piainana sy ny tombontsoa.
Ny fanodinkodinam-panitsiana dia vokatry ny kolontsaina ara-kolontsaina sy ara-teknolojia matihanina. Estes detalhes são destacados abaixo:
O cliente exige. Ny mpividy dia nanampy ny fanandramana niainana tao an-tsainy. Assim, dia manome azy ny fametrahana ny rafitra fiarovana amin'ny mpanjifa sy ny mpanjifa amin'ny ankapobeny.
Orientação do processo. Ny fampiasana ny fampitaovana sy ny dinganina amin'ny dingan-diplaoma ho an'ny fametrahana fototra fototry ny asa, vokatra ara-dalàna amin'ny asa fanaovan-draharaha sy ny fanabeazana
Ny fananganana fiovan'ny toetr'andro dia ny fananganana orinasa fanodikodinana volam-panjakana,
Eo am-pandrenesana, ny digital transformação da mudança real que causa uma tempestade no corpo corpora. Ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro dia hita fa tsy misy ny asa, fa ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa sy ny orinasa isan-karazany. Ny CIOs sy ny mpampita vaovao dia manan-danja mba hahazoana antoka fa ny fanavaozana dia mitarika ny fiovan'ny toetr'andro, ny fiatrehana ny fiarahamonim-pirenena, ny fiarovana ny vokatra ara-pahasalamana.